HOME > Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Somali
Badhitaan COVID-19 Bilaasha
Looma baahna lambarka social security ga.
Looma baahna inshuransi.
Baadhitaaku waa bilaash.
Ayay tahay inuu iska baadho COVID-19?
Dadka u dhawaaday qof laga helay fayriska COVID-19; ama dadka mid calaamadahan kamida leh: qadhqadhyo, qufac, xumad, madax xanuun, dhadhan ama urin la'aan, muruq xanuun, neef yaraan ama neef too ku adag, cuna xanuun.
Ayaa heli kara baadhitaan COVID-19 bilaasha?
Prevea Health waxay siisaa baadhitaan COVID-19 bilaasha dadka mid ama inbadan oo calaamadahan leh: Qufac, neef yari, neefsasho adagy, xumad, qadhqadhyo, qadhqadhyo la gariirid, muruq xanuun, madax xanuun, cuna xanuun, dhadhan ama urin la'aan, sidoo kale waxaan baadhnaa dadka udhawaaday qof COVID-19 laga baadhay ama lagabaadhayo oo la kaaraanti nimeeyay.
Xagee badhitaan COVID-19 bilaasha lagu bixiyaa?
Meelo Prevea oo gaara kunayaala Green Bay, De Pere, Marinette, Kewaunee, Manitowoc, Sheboygan, Oconto Falls, Shawano, Eau Claire, Chippewa Falls iyo Rice Lake. Waad heli doontaa tilmaan dheeraada markaad doorato meesha aad jeclaan lahayd inaad baadhitaanka kumarto.
Balan maan ubaahanahay?
Haa, maadaamood websitekan gashay meeshii loo baahnaa ayaad joogtaa! fadlan gal'uun akawnti gagaaga myprevea.com (ama Sign Up dooro si'aad akawnti u samaysato). Kadib, kudhufo "COVID-19 Test" oo raac tilmaanta.
Sidee badhitaanka looqaadaa?
Tijaabada COVID-19 waa dhakhso iyo xanuun la'aan. Mid katirsan shaqaalahayaga ayaa swap ka qaadii dulalka sankaaga. Swapka, sankayar ee hore ayaa lagaqaadaa. (Markii hore, tijaabadu waxay u baahnayd inaa dulalka sanka xaga danbe ee sanka iyo afku ku kulmaan lagaqaado, lakiin imika taa looma baahna si tijaabo fiican loo qaado)
In inteeleeg bay jawaabtu qaadataa?
Jawaabta waxaa lasiyaa inta udhaxaysa 2 iyo 7 cisho. badanaa, jawaabta waxaa lasiyaa 48 saacadood gudahood. hadii tijaabadu ay tahay negative (lagaa waayay), jawaabtaada waxaa lagaa siin myprevea.com dhexdeeda. haday positive tahay (lagaa helay), waalagula soo hadli
Hadaad su'aalo dheeraada hayso aanad rabto inaad qof lahadasho:
Wac (920) 272-3540 su'aalaha tijaabada bariga Wisconsin.
Wac 715) 717-4582 su'aalaha tijaabada woqooyoga Wisconsin.
Ha u iman kiliniga agtaada ama isbitaalka agtaada baadhitaanka COVID-19 ka.
Balan caadiya dhakhtarkaaga ha ka qabsan online si lagaaga baadho COVID-19 ka.
Hadaad aad u xanuusanayso fadlan wac 911.
Booqo boggan si aad u hesho liistada dhammeystiran ee ilaha tarjumaadda Soomaaliga: https://wwwn.cdc.gov/pubs/other-languages?Search=somali&Sort=Lang%3A%3Aasc&Language=Somali